पूर्व एमाले मेयरले सीसीटीभी बन्द गरेर अश्लिल हर्कत गरेपछि देखियो कम्युनिस्टको क्रूर पारा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
इटहरी – इहटरी उपमहानगरपालिका प्रमुख (मेयर) द्वारिकलाल चौधरीले कम्युनिस्टको क्रूर पारा देखाउँदै कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेपछि हंगामा मच्चिएको छ ।
मेयरको दादागिरीविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । कार्यालयका सबओभरसियर राम खड्कालाई कार्यकक्षबाट जबरजस्ती निकालेको तथा नायवसुब्बा मनोज दाहाललाई कार्यकक्षमै पुगेर हातपात गरेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
अवान्छित, अलोकतान्त्रीक र आपराधिक हर्कत भएको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन गरेका छन् । ‘कर्मचारी कुट्ने मेयर मुर्दावाद’ भन्दै कर्मचारीहरूले नगरबाट नारा जुलुस निकाल्दै सडकसम्म आएर चर्काे नाराबाजी गरेका थिए ।
इटहरी उपमहानगरपालिका कर्मचारी परिवारको नाममा कर्मचारीहरूले आजबाटै उपमहानगरका सबै २० वडामा समिति र नगरपालिकाको कार्यालयमा तालबन्दी गर्ने र भोलिबाट उपमहानगरको प्रांगणमा भेला हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
बुधबार साढे पाँच बजेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि मेयर चौधरी गाडीमा चढेर हतारहतार बाहिरिएका थिए । मेयर चौधरी नगरकार्यपालिकाको बैठक सकेर आफ्नो कार्यकक्षमा नआइकन घुमाउरो बाटो भएर गेटमा निस्किएर बाहिरिएका थिए ।
बुधबार दिउँसो तीन बजेपछि इटहरीका मेयर नासु मनोज दाहालको कार्यकक्षमा पुगे । आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्ने दाहाललाई मेयरले ‘भ्रष्टाचारी’ भन्दै गाली गर्न थाले । दाहालसँगै रहेका एक कर्मचारीका अनुसार उनले गाली गर्दागर्दै दाहाललाई हातपात गर्न थाले । अश्लिल गाली र हातपात गरेर मेयर आफ्नो कार्यकक्षमा गए ।
कर्मचारी कुटेको प्रमाण खोज्न कर्मचारीहरू सीसीटीभी फुटेज खोल्न थाले । मेयरले सीसीटीभी बन्द गरेर कुटपिट र गालीगलौज गरेको कर्मचारी सुरेश कार्कीले बताए । कार्कीका अनुसार नियतवश मेयर चौधरीले कर्मचारी दाहाललाई सीसीटीभी अफ गराएर कुटेका थिए ।
बुधबार नै मेयर चौधरीले अपराह्न आफैले नियुक्ति गरेका कर्मचारी राख्न खड्कालाई घिसार्दै कार्यालयबाट निकालेका थिए । इटहरीका स्थानीय चाणक पोखरेलको परिवारबाट घुस लिएको भन्दै मेयरले कर्मचारी खड्कालाई निकालेका थिए । घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिने नाममा सेवाग्राहीबाट घुस लिएको भन्दै मेयर चौधरीले अश्लिल गाली गर्दै खड्कालाई निकालेका थिए । अश्लिल गालीगलौच हुँदा त्यहाँ भएका व्यक्ति लजाएका थिए ।
आफूले घुस नलिएको तर मेयर चौधरीले उजुरीको आधारमा आफूलाई दुव्र्यवहार गरेको कर्मचारी खड्काले दाबी गरेका छन् । इन्जिनियर, ओभरसियर लगायत अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरुसँगै बोलाएर मेयरले अश्लिल गाली गर्दै निकालेको आफैंले स्वीकारेका छन् ।